Fivavahana eto Madagasikara Kolontsaina malagasy Fivavahana amin ny razana Avelo in Rajemisa - Raolison, Rakibolana malagasy 1985. Lahatra in Regis
sary sikotra sy mpanao hosodoko malagasy teraka tamin ny 30 Jolay 1950 tao Betroka. Rajaona Edouard ao amin ny Tranonkalan ny Ministeran ny Kolontsaina
ilay fanampiana avy any ivelany, na dia ho an ny tena aza, ary anefa tsy fototry ny fivoarana maharitra. Kolontsaina malagasy Tantaran i Madagasikara
ny Ntaolo malagasy amin ny kolontsaina silamo dia naetry voninahitra tsy ho andriamanitra ireo andriamanitra maro hafa ninoan ny Malagasy ka i Zanahary
misy santionan ny asany ao amin ny Tranonkalan ny Ministeran ny Kolontsaina Malagasy voalohany niatrika ny festival BD tany Angoulême France rehefa nahazo
avy sy ho avy aoriantsika taranaka, fara sy dimby Ny tandroy no tena mahay manonona azy amin ny fomba mampivoitra ilay fototeny. Kolontsaina malagasy
Toamasina Tantaran i Madagasikara Governemanta malagasy Politika ao Madagasikara Kolontsaina malagasy Fivavahana eto Madagasikara Fiteny eto Madgasikara
Ny Makoa dia foko malagasy monina ao amin ny morontsiraka avaratra andrefan i Madagasikara. Ny mponina ao ampovoan - tanin i Madagasikara dia miantso